Maraoka : Sida, vola, kilalaom-pilàna ara-nofo · Global Voices teny Malagasy
Tena mpankafy [kilalao fampiasa amin'ny firaisana ara-nofo] ireo vehivavy maroakàna
Voadika ny 03 Septambra 2020 10:43 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, македонски, English
Tsy dia voadonan'ny VIH loatra raha i Maraoka, raha ampitahaina amin'ireo firenena afrikàna hafa. Araka ireo tarehimarika ofisialy, nanomboka tamin'ny andiantaona 80 nahitàna ilay valanaretina, 2.800 ireo Maraokàna no nahitàna soritr'io aretina io, 22.300 ireo efa tena voa sy miaina miaraka amin'ilay otrikaretina. Ny 25 Aprily, nisy andro iray natokan'ny firenena ho fampahafantarana sy fitiliana ny VIH/sida.
Mibanjina ny ranomasina, an'i gwgs tao amin'ny Flickr.
Malaza amin'ny fandeferana io firenena io, saingy ao anaty fiarahamonina maro tanora sy azo lazaina ho misokatra, eo hatrany ireo hevidiso momba ireo olona tratr'ilay otrikaretina, ary koa ireo fitsaratsarampoana araikitra amin'ny VIH/sida, araka ny fampahatsiahivan'ilay bilaogera Miloud azy [amin'ny fiteny arabo] :
Matetika no fiheverana arahana fanambaniana no ijeren'ny fiarahamonina maraokàna ireo olona tratr'ilay otrikaretina, indraindray miharo tahotra. Afangaron-dry zareo Maraokàna amin'ny sazy avy amin'Andriamanitra noho ny fitondrantena nikiliolio ny VIH/sida, mifanohitra amin'ny fitsipi-pitondrantena sy ny fivavahana miozolmàna, ary dia ahilik'izy ireo izay voany […]. [Ireo tratrany] dia miaina anaty tahotra sy fahaketrahana, ary manana fironana ho amin'ny famonoantena vokatr'io fanilikilihan'ny fiarahamonina io sy ny tsy fisian'ny fitserana, izay mazàna, tafiditra amin'izany koa ireo havany akaiky.
Gay-Maroc-Musul, bilaogy iray natokana hibanjinana ny olan'ireo pelaka ao Maraoka, no mampahatsiahy antsika ny habetsahan'ny vola mihodina ao. Manazava izy fa ny 22 Aprily dia nihaona tamin'ny minisitry ny raharaha ivelany frantsay Bernard Kouchner ireo ONG, isan'izany ny fikambanana lehibe ao Maraoka miady amin'ny sida ALCS, mba hangataka vola fanampiny misimisy kokoa avy amin'ny Tahirimbola Erantany hiadiana amin'ny sida, ny raboka ary ny malarià. Nandiso fanantenana azy ireo ny valinteny avy amin'ny minisitra :
Napetrak’ [ireo fikambanana] tsara ny hoe tsy manana ny ho enti-mànana sahaza intsony hamatsiana ireo tetikasa rehetra efa nahazo fankatoavana ara-teknika sy siantifika naterin'ireo firenena tena mahantra tany aminy ny Tahirimbola Iraisampirenena. Nefa nahilik'i Bernard Kouchner mazava be ny mety ho fampisondrotana rehetra ataon'i Frantsa ao amin'ny Tahirimbola Iraisampirenena, nanamfay fotsiny ny fitazonana ny famatsiambola efa ataony amin'izao fotoana.
Any amin'ireo firenena marobe, ary indrindra fa ireo fatra-pifikitra amin'ny nentindrazany, ny fahatongavan'ny valanaretina VIH/sida dia tena nanova tanteraka ny fomba fijery ny resaka firaisana ara-nofo, izay efa fady hatry ny ela ny firesahana azy. Raha toa ny fiarahamonina maraokàna manandrana mitady izay fomba tena mahomby hiadiana amin'ilay valanaretina, ny adihevitra ety anaty tambajotra eny anivon'ny tontolon'ny bilaogy kosa lasa miha-misokatra ary dia ahitantsika mariky ny “fahalalahan-tsaina”, araka izay mety hiantsoan'ny sasany azy. Ho an'i Vanessa Pellegrin, mpanao gazety monina ao Casablanca ary manoratra ao amin'ilay bilaogy iraisana Casawaves :
Mifanohitra amin'ireo hevitra voaray hatrizay, tena mpankafy [kilalao fampiasa amin'ny firaisana ara-nofo – sextoys] ireo vehivavy maraokàna (indrindra fa ireo eo anelanelan'ny taona 20 sy 25). Raha tsy hilaza ireo fanafarana manokana atao amina namana iray hivahiny any Eoropa, ary hitondra miverina miaraka aminy kilalaom-betaveta iray any anaty akanjony, dia misy tena tambajotra, miafinafina tanteraka sy tsara lamina, izay miandraikitra ny fivarotana ireny kilalao ireny ho an'ny olondehibe.
Niteraka fitosatosaky ny fanehoankevitra avy amin'ireo liana sy mpankafy io lahatsoratra io.